LiveU: တက္ကဆက်နည်းပညာနည်းပညာလေ့လာမှု NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » LiveU: တစ်ဦးကတက္ကဆက် Tech မှဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာ
ဤစာရွက်စာတမ်း၎င်းတို့၏အတွက် LiveU နည်းပညာတက္ကဆက် Tech မှတက္ကသိုလ်ရဲ့အသုံးပြုမှုအကျဉ်းချုပ်ပေးသည်
အဆိုပါတက္ကဆက် Tech မှတက္ကသိုလ်အားကစားသမားဌာနသူတို့ကိုခွင့်ပြုမယ်လို့နည်းပညာရှာကြံခဲ့သည် မျိုးစုံတည်နေရာကနေသူတို့ကျောင်းအားကစားဖြစ်ရပ်များအပေါငျးတို့သကျရှငျနထေို-stream ။ တက္ကဆက်ပြည်နယ် Tech မှ၎င်းတို့၏အားကစားသမားအစီအစဉ်ကိုအလွန်သန်စွမ်းခြင်းနှင့်ဆက်ကပ်အပ်နှံဖြစ်ခြင်း, နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းထုတ်လွှင့်ခံရဖို့ 60 အားကစားဖြစ်ရပ်များထက်ပိုရရှိထားပါသည်။ အားကစားထူးချွန်၏တက္ကဆက် Tech ရဲ့ရှည်လျားသမိုင်းနှင့်အတူတက္ကသိုလ်သူတို့ရဲ့အားကစားသူတို့ရဲ့တက္ကဆက် Tech မှလယ်ကွင်းများနှင့်နေရာများ၌ရှိသမျှသောအနေဖြင့်ဖြစ်ရပ်များအဖြစ်ကွာဂိမ်းများနှင့်ဖြစ်ရပ်များအပေါငျးတို့သထုတ်လွှင့်ဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုချဲ့ထွင်ရန်လိုအပ်နေသည်။ ကြောင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ဖိုင်ဘာမှတဆင့်ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်များ၏ဝယ်ယူသို့မဟုတ်ငှားရမ်းဖြစ်ခြင်း ဂြိုဟ်တု ထရပ်ကားတက္ကဆက် Tech မှအခက်အခဲအားလုံးဖြစ်ရပ်များအတွက်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအကြောင်းအရာလေးလည်းရှိခြင်းခံခဲ့ရအလွန်အဘိုးထိုက်သောဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောကျောက်ဂျွန်ဆင် softball လယ်ပြင်နှင့်ယောဟန်က Walker ကဘောလုံး Complex အဖြစ်တက္ကဆက် Tech မှနေရာများတက္ကဆက် Tech ရဲ့ထုတ်လွှင့်အဆောက်အဦကြော်ငြာအဆိုပါအားကစားကွင်းများအကြားမျှတည်ဆဲဖိုင်ဘာအခြေခံအဆောက်အအုံရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါတက္ကသိုလ်ကိုသူတို့တိုက်ရိုက်-streaming များရရှိနိုင်မှုနှင့်စွမ်းရည်များတိုးချဲ့နိုင်ရန်အတွက်အဖြေတစ်ခုလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။
LiveU ရဲ့ဆယ်လူလာဂီယာ devices များဖြစ်နိုင်မဟုတ်ဘဲစျေးကြီးဖိုင်ဘာဆက်သွယ်မှုထက်ဆယ်လူလာဒေတာကိုချိတ်ဆက်ပြီးသူတို့ရဲ့အားကစားအကြောင်းအရာဆည်းပူးဖို့တက္ကဆက် Tech ရဲ့အားကစားသမားထုတ်လုပ်မှုအသင်းကိုလုပ်ကြ၏။ တက္ကဆက်ပြည်နယ် Tech မှ LiveU ရဲ့နည်းပညာကိုတစ်ဦးသိသိသာသာပိုပြီးကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ကိုမြင်တော်မူ၏။ နှင့် သူတို့ရဲ့ LiveU ဂီယာယူနစ်နှင့် LiveU ဗဟို cloud-based စီမံခန့်ခွဲမှုဝန်ဆောင်မှု၏ပေါင်းစပ်တက္ကဆက်ပြည်နယ် Tech မှတိုက်ရိုက်ပြန်စတူဒီယိုမှသူတို့ရဲ့ content တွေကိုစီးဆင်းနှင့်တိမ်တိုက်မှတဆင့်တိုက်ရိုက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာဖြစ်နိုင်တဲ့တက္ကဆက် Tech မှ Fox ကအပေါ်ကိုသူတို့ကသူတို့ကျောင်းရဲ့တိုက်ရိုက် Web-ဘူတာရုံအပေါ်အားကစားအကြောင်းအရာအဖြစ်တက္ကဆက် Tech မှတီဗီထုတ်လွှင့်ရန်အဘို့အဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ တက္ကဆက်ပြည်နယ် Tech မှ connection ကိုပါဝါကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် Wi-Fi သို့မဟုတ်ဆယ်လူလာဒေတာနှင့်အတူ LiveU ရဲ့ထုတ်လွှင့်ထုတ်ကုန်များ အသုံးပြု. ဆက်သွယ်မှုမရှိခြင်းဖယ်ရှားပစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ..
အဆိုပါတက္ကဆက် Tech မှခေါင်းဆောင်ပိုင်း LiveU အားကစားဌာနအဘို့ဖြစ်စေခြင်းခံခဲ့ရသောတိုးတက်မှုများကိုမြင်လျှင်, နှင့်အခြားသောအဓိကကျသည့်ဖြစ်ရပ်များအတွက်ကြောင့်မူတည်ပြီးချင်တယ်။ ဒါကြောင့်တက္ကသိုလ်ကိုလည်း-stream ကိုအသကျရှငျနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအမြင့်ပညာရေး Conferences ကနှင့်အမျှကြီးမားသောတက္ကဆက် Tech မှဖြစ်ရပ်များထုတ်လွှင့်ဖို့ LiveU ကိုအသုံးပြု အလင်းများ၏နှစ်ပတ်လည် Carol.
တက္ကဆက်ပြည်နယ် Tech မှယခုကုန်ကျစရိတ်၏အစိတ်အပိုင်းများအတွက်ပိုမိုစိတ်ချ bandwidth ကိုနှင့်အတူမြင့်မားသောအရည်အသွေးအကြောင်းအရာစီးဆင်းနိုင်ပါတယ်
တက္ကဆက်ပြည်နယ် Tech မှ LiveU ဗဟိုသုံးပြီး, TX သုံးနာရီကြာ Midlands ပြန်လဂ်ဘုခ်, တက္ကဆပ်မှာသူတို့ရဲ့အသံလွှင့်စက်ရုံများမှ TX ကနေနွေဦးချန်ပီယံ၎င်းတို့၏ကွာ stream နဲ့ဟူစတန်အတွက် Fox ကအားကစားကိုတိုက်ရိုက်ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ခဲ့သည်။
"LiveU ခင်မှာကျွန်တော်နိမ့်ဆက်သွယ်မှုအားကစားကွင်းကနေအရည်အသွေးနိမ့်အကြောင်းအရာ streaming ခဲ့ကြသည်," ဒါဝိဒျ Houghland တက္ကဆက်ပြည်နယ် Tech မှတက္ကသိုလ်များအတွက်အသံလွှင့်န်ဆောင်မှုများ၏ညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်။ "အခုဆိုရင် LiveU ရဲ့ဆယ်လူလာဂီယာပစ္စည်းတွေနဲ့ content မန်နေဂျင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူတစ်ပြားချပ်ချပ်, အနိမ့်လစဉ်ကြေးသည်, ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သလောက်ကိုဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်ခြင်း, အစားအသီးအသီးအဘို့အအခကြေးငွေပေးဆောင်ခြင်းထက်ဘယ်နေရာကနေမဆိုနှင့်ထုတ်လွှင့်ဂိမ်းများနှင့်ဖြစ်ရပ်များ-stream ကိုအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ပါလိမ့် တည်နေရာ။ LiveU ရဲ့နည်းပညာကိုအမှန်တကယ်တက္ကဆက် Tech ရဲ့အားကစားနှင့်အသံလွှင့်ဌာနတစ်ခုပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်၏။ "
မီဒီယာ Post- ထုတ်လုပ်မှုအတွက်သစ်ကိုပုံမှန်အပေါ် Panel ကို - ဇွန်လ 21, 2020
NewTek TriCaster® Mini 4K သည်ထုတ်လုပ်သူများအားနေရာဒေသများမှပရိသတ်များထံရောက်ရှိစေရန်မြေပြင်နည်းပညာဆော့ဝဲလ်အင်္ဂါရပ်များဖြင့်တိုးမြှင့်ထားသည်။ - ဇွန်လ 3, 2020
ပြေးခုံပစ်ဌာန ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ LiveU ခရီးဆောင်ပစ္စည်းကိရိယာများ အားကစားအသံလွှင့် တက္ကဆက်ပြည်နယ် Tech မှဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2015-09-18
ယခင်: ZeeVee ဗီဒီယိုကျော် IP ကိုဖြေရှင်းနည်းနှင့်အတူသစ်ကိုစျေးကွက်အစိတ်အပိုင်းများသို့ပြင်းထန်တဲ့ပြောင်းရွှေ့စေသည်
နောက်တစ်ခု: စပိန်ဘာသာစကားတီဗီအိမ်ရှင်ဒွန် Francisco ကလေလံနှုတ်ဆက်